Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || कथाः आशा – kayakairan.com
म कसरी प्रेम गर्न सक्छु रुन त म राम्री छु, न म सहरमा बसेकी छु । यो गाऊको सानो झुप्रो घरमा बुढी हजुर आमाको साहारामा बाँची रहेकी म, पढाई भन्नु जम्मा सात कक्षा सम्म मात्र पढेकी छु । बैशाखी को साहारामा मुस्किल ले हिडडुल गर्ने म जस्ती नराम्री केटी संग किन ऊ घरी ९ घरी एउटै कुरा दोहोराई रहन्छ तिमीलाई म धेरै माया गर्छु भन्दै । भनिरहहन्छ घरी–घरी तिमीलाई म बिहे गर्न तैयार छु । किन होला ऊ यति धेरै म प्रति आकर्षित भएको, के यो साचो हो ? ऊ त्यति सुन्दर छ, पढेको मान्छे । गाउँ को बैकमा सरूवा भएर आएको एक बर्ष जति मात्र भयो । सहरमा घर परिवार सबै छन् रे म कसरी विश्वास गर्न सक्छु र उसले सच्चा प्रेम गरेको हो भनी । अहँ कत्ति पनि विश्वास छैन मलाई । त्यति राम्रो, पढेको जागिरे मान्छे संग त पढेकै राम्री सहरिया केटीहरू जति भने पनि पाईन्छ । आज घरमा आयो भने म राम्रो संग कुरा टुड्गिने गरी भनी दिन्छु, यो हुनै नसक्ने कुरामा म के भनेर सपनाको महल ठडाऊ ।
आशा एक्लै आफ्नो कोठामा बसेर आफै संग एक्लै गन्थन गरिरहेकी थिइन् । झमक्क सॉझ परिसकेको थियो । बिजुली स्विच अन गरिन कोठा उज्यालो भयो, कोठाको सानो झ्याल बाट बाहिर बाटो तर्फ के ऑखा लगाउदै थिइन् । एउटा छायाँ झ्यालमै देखियो, सधै आशालाई माया गर्छु भन्ने अमर नै रहेछन् । उनी सरासर ‘आशा’ भन्दै कोठामै पुगे आशाले बस्नोस् भन्न नभ्याउदै पलड्ग नजिक भएको कुर्चीमा बसे ।
आशा, के गर्दै छौ ?
हजुरलाई नै पर्खी रहेकी थिए ।
केही काम थियो कि म संग ? कि मायाका केही बात गर्न चाहान्छ्यौ म सँग आज ?
हो अमर, आज हजुर संग माया को नै बात गर्न चाहान्छु ।
यो दिल आतुर छ तिम्रो मायाले भरिएको आवाज सुन्न ।
अमर, म कसरी हजुरको लायक हुन सक्छु ? मलाई हजुरले माया गर्छु भनेको कुरा अहँ कत्ति विश्वास छैन्, म सपनाको प्रेम महल ठड्याउन चाहदिन, किनकी मलाई थाहा छ, अमर म हजुर योग्य छैन, त्यसैले आजै देखि मलाई हजुरले कहिल्यै पनि प्रेम गर्छु नभन्नु होला, मेरो बिन्ती छ ।
तिमी किन मलाई विश्वास गर्दिनौ आशा ? मैले तिमीलाई सच्चा र पवित्र माया गरेको छु भनेर कसरी विश्वास दिलाऊ, के प्रेम अनुहार सँग मात्र गरिन्छ र । प्रेम त दिलको गहिराईमा डुबेर गरिन्छ त्यो आफसे आफ हुने हो गर्छु भनेर प्रेम गरिने पनि त होईन १ हरेक पल म तिम्रो बारेमा नै सोची रहन्छु , भन तिमीले जुन दिन भन्छौ त्यसै दिन विवाह गर्न तैयार छु ।
के हजुरको परिवारले मलाई स्वीकार गर्नु हुन्छ त ? मैले घरमा भनिसकेको छु , उहाँहरूले मेरो इच्छालाई नकार्नु हुन्न, तिमी ढुक्क होऊ । तर अमर म कसरी हजुर योग्य हुन सक्छु ? किन सक्दिनौ रु मानिसको बाहिरी रूप सुन्दर भएर मात्र सुन्दर हुने होइन, भित्री रूप सुन्दर हुनु पर्छ, सोच सुन्दर हुनु पर्छ, व्यबहार सुन्दर हुनु पर्छ, असल गुण हुनु पर्छ, बोली मिठो हुनु पर्छ, कसैको कुभलो चिताउनु हुदैन ,आर्काको सधै भलो सोच्ने मान्छे, ज्ञान गुन ले भरीपूर्ण मान्छे, मात्र तिमी छौ, तिमीलाई बाहिरी ऑखाले होईन मेरो मनको आँखाले हेरिरहनमन पर्ने मेरी अत्यन्त प्रिय मेरो लागी तिमी विश्व सुन्दरी हौं । तिमीलाई पाउनु मेरो सौभाग्य ठानेको छु । तिमीले कहिल्यै नसोच्नु आशा । म योग्य तिमी छैनौ भनेर । यति भनेर मायाले अड्गाले आशालाई । आशाले ऑखा बाट हर्षाश्रु चुहाईन अनि अमरको न्यानो अड्गालोमा बाधिइन । यस्तैमा आशा कि हजुर आमाको ‘आशा’ भन्दै बोलाएको आवाज बाहिर बाट आयो हजुर आमाको आवाजल् दुबै सतर्क भएर छुट्टिए ।
हजुर हजुर आमा भन्दै थिईन आशा, हजुर आमा कोठा मै प्रवेश गरीन् अमरलाई देखेर बोलिन । ओहो अमर बाबु, हजुर कति बेला आउनु भयो ? नमस्कार हजुर आमा । एक्कै छिन भयो । नमस्कार बाबु । हजुर जस्तो ठूलो मान्छे भएर पनि हामी जस्ता साना मान्छेका घरमा आउनु हुदा म बुढी लाई त साह्रै खुशी लाग्छ बाबु । बुढो भए र हजुर आमा रु भरखर २८ बर्षको भए हजुर ७० बर्षको अनि हजुर भन्दा कसरी ठुलो भए र ? हा..हा….हा… गर्दै हासिन बुढीमाऊ । हजुर त साह्रै रमाईलो मान्छे, म खाना पकाउछु आज यतै खाना खाएर जानोस है बाबु । हजुर आमाले पकाउनु भएको खाना नै खान्छु भनेर आएको म त, गुन्द्रुक र भटमासको झोल, गोलभेडाको अचार संग खाने हो है तातो तातो भात । बुढीमाऊ खुशी हुदै भान्सा तर्फ लागिन् , सत्तरी बर्षको भए पनि बलियो नै थिईन् बुढीमाऊ, अमर ले भने जस्तै तातो९ तातो भात गुन्द्रुक र भटमासको झोल गोलभेडाको अचार आलुको भुजिया अनि घीउमा अण्डा फ्राई गरेर खुवाइन्, अमरले मिठो मानेर खाए थपी थपी । सँगै आशाले पनि खाइन । हजुर आमाले खाएर धन्दा भ्याईन् । तीनै जना बसी एक छिन गफ्फिए , बुढीमाऊ बेला९ बेला मज्जाले हास्थिन हा…हा… हा…गर्दै । केही बेर पछि आशा र हजुर आमा संग बिदा मागी अमर आफ्नो डेरा तर्फ लागे ।
आशा अमरको मायालु मुहार सम्झिदै ओछ्यानमा पल्टिइन् । आशा सानै छदा उनको आमा बुबाको गाडी एक्सिडेन्टमा परी मृत्यु भएको थियो । हजुर बुबा पल्टनका लाहुरे थिए,उतै लडाईमा गोली लागेर बिते पछि काठको बाकसमा घरमा ल्याईएको थियो । जिन्दगीमा धेरै दुस्ख का दिनहरू देखेकी आशा आफ्नो एउटा खुट्टा पनि एक्सीडेन्टमा नै परी काटीएको थियो । उनी त्यति बेला १३ वर्ष कि मात्र थिईन् । दुस्ख उनको जिन्दगीमा कालो छाया बनेर पछ्याई रहन्थ्यो । भगवानले पनि घरीघरी एक पछि अर्को पीडा मात्र दिईरहन्थ्यो , अप्ठ्यारो परिस्थितीको मात्र सामना गर्नु परिरहन्थ्यो । ती अध्यारा दिन संग धेरै संघर्ष गरेकी थिईन् आशाले ।
उनि घरमै बसेर धेरै राम्राराम्रा पुस्तक हरू अध्ययन गर्दथिन् । अध्ययन ले गर्दा नै उनको चेतना फराकिलो भएको थियो । जीवनमा भोगेका अप्ठेरा परिस्थितीहरूको सामना गर्नु पर्दा सानै उमेरमा ऑसुको कति नदी बगाइन् पत्तै भएन । आज भने अमरको मायालु ब्यबहारले धुम्म परेको मनको आकाश छ्याड्ग खुलेको छ । ओठमा मधुर मुस्कान छरिएको छ । मनको चरी खुशीले पंख फिजाई आकाशिदै उडीरहेझै लाग्छ । हृदयमा उमंगको फूल फक्रिए झै लाग्छ । कुनै दिन आफ्नै जीवन प्रति दिक्क हुदै बोझ ठानेको जिन्दगी आज त्यही जिन्दगीको अत्यन्त माया लागेर आएको छ । धेरै बाँचु हृदय खोलेर हाँसु हाँसु लागेको छ । जिन्दगीका आरोह अबरोहमा थाहा छैन कति बेला के हुन्छ रु तै पनि चाहान्छिन् अबका यात्रा हरू सरल र सहज हुन् । जीवन जीवन बाँचे जस्तै होस् । जिन्दगीमा फूलले जस्तै सुवास छर्न सकोस् । जति भोगे दुःख, चोट पीडाहरू अबका दिनमा भोग्न नपरास् । यस्तै सोच्दा सोच्दै सपना देख्न थालिछन् आशा ।।। बादल माथी माथी उड्दै थिईन् अमरको हात थाम्दै ।
बिती रह्यो समय कहिले बसन्त कहिले गृष्म त कहिले शिशिर भएर, बृक्ष हरूमा कहिले पालुवा पलाए, कहिले फूल फुलेर शुशोभित भए त कहिले बृक्षका पात सबै झरेर उजाड कुरूप देखियो, जिन्दगीको दौडानमा कहिले बसन्त मुस्कुरायो कहिले उजाड बन्यो जिन्दगी । मौसम जस्तै बेला बेला परिवर्तन हुने गर्छ जिन्दगी पनि । मौसम जस्तै आशाको जिन्दगी पनि परिवर्तन भएको थियो ।
समय बित्न कति बेर लाग्दो रहेछ र । आशा र अमरको बिबाह भएको पनि ६ महिना भै सकेको थियो । तर अमरले आशालाई बिहे पछि आफ्नो घरमा लगेका थिएनन् । अमरका आमा बुबा र बहिनी त्यही आएका थिए । विवाह मन्दिरमा गई स्वयम्बर गरी साधारण तरीका बाट भएको थियो ।
विवाह पश्चात अमर पनि आशा संगै बस्दै आएका थिए । बुढी हजुर आमा पनि साह्रै खुशी थिईन् ।एउटा सानो घर थोरै जग्गा आशाको नै नाममा गरिदिएकी थिईन् हजुर आमाले । आशाले अमरको माया पाएर आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी ठानेकी थिईन् ।बिबाहको एक बर्ष पछि आशाले छोरी जन्माइन् । अमर कहिले काही आफ्नो घरमा जाने गर्दथे । आफ्नो काम त्यही गाउँमा भएको कारण धेरै दिन सहरमा बस्दैनथे तुरून्त फर्कन्थे । छोरीको नाम अनुराधा राखेका थिए । छोरी साह्रै राम्री थिइन् । छोरी एक वर्ष पुग्नै लागेकी थिइन् । टुकुटुकु हिड्ने भएकी थिइन् । आशाको हजुर आमालाई एक्कासी ज्वोरो आयो गाउँ कै अस्पतालमा अमर लगेर जचाई औषधी खादै थिइन् । ज्वोरो निको भएन अब सहर लानु पर्ला भनी अमरले आशा सँग कुरा गर्दै थिए अचानक हजुर आमाको मृत्यु भयो । हजुर आमाको मृत्युमा धेरै रोईन आशा ।काज क्रिया आशा ले नै गरिन् । समय आफ्नै गतिमा अगाडी बढी रह्यो । बैशाखीको साहारा लिएर आशा ले घरको सबै काम गर्ने गर्थिन् । छोरी हुर्कदै थिइन् । अमर र आशाको जिन्दगी राम्रै सँग बिती रहेको थियो । अचानक अमरको सरूवा पहिलेकै ठाउँमा आफ्नो घर सँगै भयो ।अब अमरले गाउँ छिट्टै छोड्नु पर्ने भयो । अमरको सरूवाको खबरले आशा ज्यादै चिन्तित भईन् । उनको ऑखा बाट ऑसु थामिनै सकेन । राती घरमा आशालाई सम्झाउदै थिए अमर । आशा तिमी चिन्ता नलिउ । म अहिले जान्छु र केही दिन पछि तिमीलाई लिन आउछु, म लिन नआइञ्जेल छोरीको राम्रो स्याहार सम्भार गर्नु , तिमी बुझ्ने छौ, धेरै चिन्ता नलिनु । तिमी नै मेरो जिन्दगी हौ । तिमी बिना म पनि त कहाँ बस्न सक्छु र । म छिट्टै तिमीहरूलाई लिन आउछु ।
तर अमर १ म बैशाखीको साहारामा हिड्नु पर्ने मान्छे । यस्ती मलाई देखे भने हजुरका छिनेकीले के सोच्लान् । म कसरी जान सक्छु रु फेरी हजुर बिना एक पल पनि बाच्न गाह्रो छ मलाई १ हजुरको बिछोडमा म कसरी दिन बिताउन सकुला । हजुर बिना बाँच्न सक्दिन अमर म । हजुरको साथ पाएर आफूलाई अत्यन्त भाग्यमानी ठानेकी थिए ।भगवानले पनि सधै मलाई पीडा मात्र दिई रहन्छ । उनीरोइन् । भक्कानिदै अमरले आशालाई आफ्नो छातीमा टाँसेर अड्गाले अमरको ऑखा बाट पनि ऑसुको धारा बगि रह्यो । कम्पित स्वरमा सम्झाउदै थिए अमर नरोऊ आशा म छिट्टै आउछु तिमीहरूलाई लिन , तिमी बिना म पनि त बस्न सक्दिन भन्दै सम्झाउदै थिए अमर ।
केही दिन पछि अमर, आशा र छोरी लाई छाडेर आफ्नो घर बिरगन्ज तर्फ लागे । दिनहरू बित्दै गए , आशा को ऑखाको मुल बन्द हुनै सकेको थिएन । छोरीले बाबा खै रुू भनी सोधी रहन्थिन् । सरल सहज जिन्दगी फेरी अप्ठयारो र असहज हुदै थियो । अमर सहर आफ्नो घरमा गए पछि अफिसको कामको बेफूर्सदले आउन पाएको छैन भनी फोन गर्थे । म समय मिलाएर तिमीहरूलाई लिन आउछु भनी आस्वासन भने दिईरहन्थे । अमर गएको करिब छ महिना बिती सकेको थियो । आशाको मनको आशमा कालो बादल मडारि रहेको थियो । जीवन दुस्खको बगर रहेछ सधै प्यासी र असहज जिन्दगी बिताउनु पर्ने बगरको ढुड्गा जस्तै ठानेकी थिईन आफू लाई । एक दिन सॉझ अकस्मात आशाका सासु शशुरा आई पुगे । अचम्ममा परिन आशा । तै पनि खुशी भईन सासु शशुराको आगमनमा । आफ्नो अमरको हाल खबर के कस्तो छ भनी बुझ्दा , अमर धेरै बिरामी भएको र उपचारको निम्ती दिल्ली लानु पर्ने भयो भएको पैसा सबै उपचार मा खर्च भयो पैसा छैन् त्यसैले तिमी कहॉ आएको भन्दा छायॉ बाट खसे जस्तै भइन् आशा ।
आशाको नाममा तीन कठ्ठा बारी थियो । उस्को जीउने आधार पनि त्यही थियो । जस्को कमाई बाट आमा छोरी को जिन्दगी बॉची रहेको थियो । अब के गरौ कसो गरौ दोधारमा परिन आशा । सासु शशुरा रूदै छोरालाई बचाऊ पछि छोराले कमाएर किन्छ, तिमीहरूलाई राम्रै संग पाल्छ भनि आस्वाशन दिए पछि लोग्नेको मायाँले गर्दा तीन कठ्ठा जग्गा बेचेर सबै पैसा सासु शशुराको हातमा राखी दिइन् । आफु पनि संगै जान्छु भन्दै थिइन् । सासु शशुराले तिमी संगै जान गाह्रो हुन्छ किनभने हामी तुरून्तै उपचारको निम्ति दिल्ली जान्छौ बरू उता बाट फर्के पछि तिमीलाई लिन आउछु भनि सम्झाएर दुबै जना आशा संग बिदा भएर बाटो लागे । आशा धेरै रोइन् । लोग्ने बिरामी हुदा भेट्न जान पनि नसक्दा फेरी आफ्नो जिन्दगी जिउने आधार भएको जग्गा पनि बेच्नु पर्दा धेरै दुखी भईन आशा । दिनहरू बित्दै गए, अमरलाई फोन गर्थिन् फोन लाग्दैनथ्यो । त्याहाको हाल खबर केही बुझ्न पाएकी थिइनन् । दिन हरू बित्ने क्रममा हिऊद बिते , बर्षा बिते , मौसम परिवर्तन भयो तर आशाको जिन्दगीमा कहिल्यै बसन्त रितुको आगमन भएन । आँखा बाट बर्षे झरीले कहिल्यै छाडेन। आफ्नो प्रिय मान्छेको प्रतिक्षा गर्दा गर्दै २ बर्ष बित्यो केही खबर आएन । अमर ले काम गर्ने बैक बाट सोध खोज गर्दा अहिले काम छोडी सकेको थाहा भयो । बुझ्ने क्रममा आफु बसेको बिरगन्जको घर पनि बेचेर कहाँ गए केही थाहा भएन ।
आशा को आशा निराशामा परिणत भै सकेको थियो । अमर ले यसरी धोखा दिनेछन् भन्ने उनलाई शंका पनि थिएन् । अमरले धोखा दिए वा आमा बुबाको जालमा परे केही थाहा भएन आशा लाई । आफ्नो जिउने आधार पनि लुटियो । कसरी जाल गर्न सके एउटी लाचार विवश महिला माथी । मान्छे यति सम्म तल गिर्न सक्दो रहेछ आशा सोची रहन्छे । छोरी ठुली हुदै थिइन, सरकारी स्कूल पढ्थी , पढ्न तेज थिई , सधै प्रथम हुन्थी । अब आशाको संसार अनुराधा थिई । अमरले छाडेर गएको बर्षौ बित्यो कहिल्यै फर्केनन् । आशाले अमर संग देखेका सुन्दर सपनाहरू शिशा फुटे सरी चकनाचुर भएको थियो कहिल्यै नजोडिने गरी ।
आफ्नो जिन्दगीमा अमर पाउदा ढुड्गालाई पनि देवता ठानेर पुजेकी थिइन् । आज देवतालाई ढुड्गा मान्न विवश थिईन् उनले पाएको धोखामा । आफ्नो दिस् खमा चुपचाप हेर्ने देवताले खै के गर्लान् र उनी सोच्दै थिईन् । जिन्दगीका अनगिन्ती औशीका रातहरू बिताई रहदा के कुनै रात पूर्णिमा बनेर जिन्दगीमा प्रवेश गर्ला ? ऊ सोची रहन्छे जिन्दगीको ग्रहण को घाम संग परास्त हुन सकोस् । मेरो जिन्दगीको घाम भन्नु , मेरो जिन्दगीको पूर्णिमा भन्नु मेरी छोरी अनुराधा नै हो भन्थिन् । अमरलाई प्रतिक्षा गर्नु आफूलाई दुस्खी तुल्याउनु मात्र हो । जीवनका भोगाईहरूमा धेरै दुखी, धेरै छट्पटाई, धेरै टुक्रिइ, धेरै तड्पिई, अध्यारो रात पछि बिहान अवश्य हुन्छ । आज छोरी अनुराधा आफ्नो बुबाले काम गर्ने गाउँ कै बैकमा चट्ट ड्रेसमा सजिएर आमालाई बाय …बाय मम्मी … । भन्दै अफिसको निम्ती निस्किइ । आशाको आँखा बाट हर्षाश्रु झर्दै थिए नथामिने गरी । जति बिर्सन खोजे पनि अमर संगको याद आशाको दीलमा ताजा भएर सताई रह्यो ।